Simbe Load Yemagariro Mabhatani neSocialite.js | Martech Zone
Nhasi ndanga ndine zuva rinonakidza pamwe newebhu webhu kuAngie's Chinyorwa. Chinyorwa chaAngie chave kuvandudza saiti yavo kuita raibhurari yezvishamiso ... uye panguva yese iyi ivo vachiramba vachikurumidza saiti yavo. Iwo mapeji anotakura nekumhanyisa kumhanya. Kana iwe usingatendi ini, pop up peji rino pa Garaji Masuo.
Iyo peji inosanganisa mifananidzo, vhidhiyo, uye magariro mabhatani… uye ichiri kutakura mumamiriseconds. Kuenzanisa saiti yavo neyangu kwakafanana nekumhanyisa Prius neF-16. Izvo hazvisati zvaitwa, futi, kugara uchitsvaga nzira dzekuvandudza ruzivo rwevatengi uye kuwana izvo zvemukati zvakawanikwa uye zvakagovaniswa.
Isu hatina yakazara-nguva yekuvandudza timu kana zviwanikwa zveveruzhinji kambani, saka kufambira mberi kwedu kunononoka kupfuura Angie's Chinyorwa. Tine muenzi anoshamisa ne Flywheel - kushandisa kwavo kwepamberi caching uye CDN, asi isu tinoziva kuti kuchine zvimwe zvinhu zvinotikuvadza. Semuenzaniso, mifananidzo yedu haina kukwidziridzwa. Kune masevhisi kunze uko iwe aunogona kushandura mifananidzo yako kuita chidimbu chehukuru hwayo iwe uchichengetedza kujekesa kwavo… tiri kuvatarisa.
Pandaive ndichivaratidza saiti yedu, ndakazvonyongoka ndokurembedza musoro wangu peji rakaita chando pakurova bhatani rezvemagariro. Ini ndinofunga yaive Facebook. Argh… wechipiri kana maviri gare gare bhatani rakaonekwa uye iro rese peji rakatakurwa. Ugh.
Pandakatsanangura nyaya, mainjiniya wavo akabva awana mhinduro, socialite.js. Socialite inopa nzira yakapusa yekushandisa uye kumisikidza mabhatani ekugovana magariro - chero nguva yaunoda. Pane gwaro mutoro, pane chinyorwa hover, pane chero chiitiko! Sezvo socialite inotakura mabhatani asynchronously, iro gwaro harizorembere pakamirira 50kb yemagariro enhau.
Nekutenda, patova neWordPress plugin inosanganisa Socialite, inonzi WPSocialite. Manheru ano ndakabvarura kodhi yangu yese yakagadzirirwa kurodha kumusoro mabhatani uye kuita WPSocialite. Ini ndakakwanisa kugadzirisa CSS uye kugadzirisa mabhatani andaida. Ndiri kutarisira kune mamwe mabhatani ari kuwedzerwa mune ramangwana - seBuffer kana Reddit… asi izvi zvakakwana izvozvi!